China Postpartum Ice Pack ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Huanyi
Nnukwu Enyemaka Ọrịa Hemorrhoid Ahụhụ Gel
29.5 * 7.5cm, 220g, aka uwe dị nro nwere ike ịweghachi ngwugwu gel, nke kachasị mma maka mgbu mgbu nwa
Usoro ọgwụgwọ oyi na-ebelata ọzịza na ọkọ, na-enye enyemaka ozugbo. Nke a na - akwalite ọgwụgwọ site na ịmụ nwa, ịkwa akwa na ịwa ahụ, ịwa ahụ, hemorrhoid, ọbara ọgbụgba, ọrịa yist, trauma site na ịme waksị, iwepụ ntutu laser, ma ọ bụ mmerụ egwuregwu, n'etiti ndị ọzọ.
Factorylọ ọrụ anyị nwere ike ịhazi setịpụrụ maka gị, dịka ọmụmaatụ 2Xgel bead packs na aka uwe 3X, ma ọ bụ ị nwere ike tinye ngwugwu gel 1X na aka 2X, naanị maka iji nkasi obi na agbanwe agbanwe.
A na-eji ngwugwu gel na-enweghị ọgwụ na-egbu egbu ma na-agbanwe agbanwe ma na-agbanwe agbanwe mgbe oyi kpọnwụrụ, na-enye nkasi obi ka ukwuu na ngwugwu ice na ngwugwu ụlọ ọgwụ.
Ọ ka mma ịtụba ha n'akpa ụlọ ọgwụ.
Enwekwara ike iji ya maka enyemaka dị jụụ n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ ahụ ọ bụla nwere ọnya, mbufụt, obere ọnya na ọkụ, ahụ ike na nkwesi ike, mgbu na-eto eto, ahụ ọkụ, na mgbe elechara anyanwụ anya. Nwere ike ịdị n'etiti usoro ọgwụgwọ okpomọkụ na oyi. Naanị tinye friji ma ọ bụ friza ruo mgbe okpomọkụ achọrọ maka mmetụta oyi / ice. Maka mmetụta dị ọkụ, tinye ebe microwave na ntinye nke abụọ 25 ruo mgbe ọnọdụ okpomọkụ achọrọ ruru.
Onwere onye jiri akwa ime akwa a? Ahụmahụ?
Ya mere enwere ekele na azụrụ m ha otu ọnwa n'ihi na m mechara nweta hemmorhoids ma chọọ ndị a maka ihe mgbu maka ahụ ọbụlagodi tupu mụọ nwa. Ihe ndị a na-agba agba nke ọma ma dị mma mgbe ị na-ewepụ ha, ọ bụghị nke siri ike ma na-agbakasị ma ọ bụ sie ike.
Hụ ngwaahịa a n'anya! Esi m n'ụlọ ọgwụ pụọ na ezigbo nwa amụrụ m. Enwere m agbaji nke abụọ na mgbe m laghachiri anaghị m akwado ya. M nyere iwu ndị a n'ihi na ngwugwu ice ndị ụlọ ọgwụ zigara n'ụlọ na-agbapụta na mpempe akwụkwọ mgbe niile. Etinyere m GentlePacks atọ ahụ na friza ha na-akpụkwa ngwa ngwa. Ana m etinye ha na uwe a na-asa akwa ma tinye ha na mpụga akwa m na ọ na-ewepụ ihe mgbu na ọzịza.
Nke gara aga: Ara Ice Pack
Osote: Ndabere azụ na akpa ice
Ihe ngwugwu Iceland kacha mma
Ihe mkpuchi Ice Ice Mgbe amuchara nwa
Ihe ngwugwu Ice maka Engorgement
Ihe mkpuchi ice maka afọ ime
Ngwunye Cold Perineal
Biputa Ọmụmụ Ice Ice
Ngwunye Cold Postpartum